EbolaShare စျေး - အွန်လိုင်း EBS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EbolaShare (EBS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EbolaShare (EBS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EbolaShare ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
EBS – EbolaShare
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EbolaShare တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EbolaShare များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EbolaShareEBS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$9.86EbolaShareEBS သို့ ယူရိုEUR€8.32EbolaShareEBS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£7.5EbolaShareEBS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.8.98EbolaShareEBS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr88.53EbolaShareEBS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.61.99EbolaShareEBS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč218.57EbolaShareEBS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł36.69EbolaShareEBS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$13.1EbolaShareEBS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$13.65EbolaShareEBS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$220.46EbolaShareEBS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$76.43EbolaShareEBS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$52.8EbolaShareEBS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹738.85EbolaShareEBS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1663.27EbolaShareEBS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$13.5EbolaShareEBS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$14.81EbolaShareEBS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿307.1EbolaShareEBS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥68.57EbolaShareEBS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1040.48EbolaShareEBS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11690.53EbolaShareEBS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3752.47EbolaShareEBS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽723.65EbolaShareEBS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴273.29
EbolaShareEBS သို့ BitcoinBTC0.000831 EbolaShareEBS သို့ EthereumETH0.0247 EbolaShareEBS သို့ LitecoinLTC0.163 EbolaShareEBS သို့ DigitalCashDASH0.0947 EbolaShareEBS သို့ MoneroXMR0.104 EbolaShareEBS သို့ NxtNXT704.83 EbolaShareEBS သို့ Ethereum ClassicETC1.36 EbolaShareEBS သို့ DogecoinDOGE2733.33 EbolaShareEBS သို့ ZCashZEC0.0978 EbolaShareEBS သို့ BitsharesBTS374.56 EbolaShareEBS သို့ DigiByteDGB360.45 EbolaShareEBS သို့ RippleXRP31.96 EbolaShareEBS သို့ BitcoinDarkBTCD0.331 EbolaShareEBS သို့ PeerCoinPPC34.64 EbolaShareEBS သို့ CraigsCoinCRAIG4376.23 EbolaShareEBS သို့ BitstakeXBS409.57 EbolaShareEBS သို့ PayCoinXPY167.65 EbolaShareEBS သို့ ProsperCoinPRC1205.13 EbolaShareEBS သို့ YbCoinYBC0.00516 EbolaShareEBS သို့ DarkKushDANK3079.78 EbolaShareEBS သို့ GiveCoinGIVE20788.46 EbolaShareEBS သို့ KoboCoinKOBO2144.77 EbolaShareEBS သို့ DarkTokenDT9.08 EbolaShareEBS သို့ CETUS CoinCETI27717.95
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 16:30:02 +0000.